Recovery File Excel - Sidee inuu ka soo kabsado files Excel on Windows / Mac
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Excel Files in Windows / Mac
Sidee ah inuu ka soo kabsado Excel ah deleated soo gudbin?
Hi, waxaan tirtiray qaar ka mid ah files muhiim ah si lama filaan ah maalmood ka hor. Hadda waxaan doonayaa in files Excel. Fadlan soo jeedin sida aan u soo kaban karto, si sax ah ama waa software ugu fiican ee same..Thanks ah.
Guud ahaan, file aad tirtirto in Recycle Bin tegi lahaa marka hore haddii aanad isticmaalin furaha toobiye u tirtirka joogto ah ama madhan Recycle Bin ah, oo waa mid aad u fudud inuu ka soo kabsado iyaga. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay in la furo Recycle Bin, heli faylasha Excel oo guji si ay u soo celiyaan.
Inkasta oo ay jiraan sidoo kale waa xaalad kale oo aad la tirtiro faylasha Excel dierectly by "wareeg + Delete" ama loo madhiyo Recycle Bin ka dib markii aad la tirtiro faylasha. Wakhtigan, aad u baahan tahay ah software Excel kabashada file sida ondershare Data Recovery ama Wondershare Data Recovery for Mac kaa caawinaya in aad u qabtaan soo kabasho.
Labada taageerada dib u soo kabashada xogta soo kabashada ee files Excel in .xls iyo qaabab .xlsx, iyo sidoo kale dukumentiyo kale sida Word, PowerPoint, qoraalka, PDF, HEML, Email, Archive, iwm ugu muhiimsan, inay ammaan iyo sahlan yihiin si ay u isticmaalaan. Waxaad isku dayi kartaa version maxkamad free hoose si aad baarista laga badiyay files Excel.
MUHIIM: Ha dejisan ama la rakibo barnaamijka si disk in aad xogta aad ka, ma noocee ah arrinta laga badiyay Excel software kabashada file aad isticmaalayso.
Talooyinka oo dhan khasaaro xogta: Marka laga badiyay files muhiim ah, isku day in aad sii asalka disk ama qalab iyo joojiyo gelinaya wixii xog ah oo cusub si ay meesha aad badiyay files, waayo xogta cusub overwrite doonaa mid ka mid ah laga badiyay oo aad u awoodin inuu ka soo kabsado. Sidaas ha isticmaalin disk ah wax ka badan hal mar waxaa xogta muhiimka ah waa laga badiyay.
Halkan aynu isku dayaan in ay dib u hesho Excel files lumay Windows in tallaabooyinka. Haddii aad tahay user Mac ah, fadlan tag hage ee soo kabashada Excel , si gaar ah u isticmaala Mac.
Talaabooyinka aad u hesho dib u files Excel leh Excel qalab kabashada file?
Step1. Dooro habka soo kabasho
Marka aan bilowno dib u soo kabashada xogta, aad ku hogaamiyay in ay hab kabashada Wizard ah, taas oo kuu ogolaanaysaa inaad ku dhameysan soo kabashada jawaabo labada su'aalood oo fudud. Ama waxaad swith karaa in Standard Mode ah, halkaas oo aad ka heli afar doorasho soo kabashada. Kaliya dooro mid ka mid ah oo aad jeceshahay oo uu horay u socdo. Labada iyaga ka mid ah waa mid aad u fudud.
Guud ahaan, Wizard ah waxaa lagu talinayaa haddii aad bilaabayso computer ah, oo bal aynu wadno la.
Step2. Calan nooca file Excel
Si aad u soo kabsado files Excel, waxaad u baahan tahay in ay doortaan "Document" halkan.
Step3. Sheeg meesha faylka
Kabashada Xogtan taageertaa soo kabashada file Excel ka computer ama qalabka saari karo. Sidoo kale, waxaad go'aansan kartaa meel gaar ah in baarista laga badiyay files Excel haddii aad xusuusan meesha aad badiyay aad files Excel. Haddii aadan samayn, waxaad dooran kartaa computer oo dhan in laga baarayo.
Step4. Bilow inaad iskaan
Markaas awood scan qoto dheer oo uu bilaabo inuu iskaan. Deep scan kaa caawin kara si aad u hesho files dheeraad ah oo aad laga badiyay waqti dheer ah ama lumay ay sabab u tahay qaab. Waxa aad ku hubin karnaa guul sare oo ka mid ah files Excel soo kabashada .
Step5. Falanqeynta ceshan files Excel
Scan ka dib, dhammaan dokumentiyada recoverable waxaa lagu ogaaday, oo ay ka mid Word, PowerPoint, Excel, PDF, Email, HTML, iwm Si aad u hesho badiyay files Excel, waxaad ku eegaan karo iyo fiiri galka ah ee XLS iyo XLSX.
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadiyo files Excel soo kabsaday oo uu meesha dhalshada. Raadi xijaab kale ama disk dibadda si ay u kaydiso, si loogu tixgeliyo ammaanka.
Video tutorial soo kabashada file Excel